Yokingụ yogọt ogbo achicha ya na mkpụrụ osisi mịrị amị | Usoro ọgwụgwọ
Ogbo achicha na yogọt na-a drinkụ
NriNkeji 55Ndị mmadụ 12Kalori 190
Enweghị ntuli aka
Achịcha taa ka anyị mere na mmiri mmiri yogọt. Typesdị yogurts a, ma ọ bụ ihe ụtọ dị ị toụ ihe ọ drinkụ ,ụ, na-enwekarị ekpomeekpo siri ike nke na, dabere na nke anyị họọrọ, ụtọ nke achicha ogbo anyị na-agbanwe.
N'elu ala anyị etinyewo ihe dị mfe mkpụrụ osisi mịrị amị. Ejirila m nkpuru nkpuru na mmanụ a honeyụ na nnu ma ị nwekwara ike iji mkpụrụ osisi.
Achịcha achicha adịghị oke na ya kpatara ya icing na-abanye n’ime. Na achicha ga-esi otú a nwere abụọ dị iche iche na agba na abụọ dị iche iche flavors. A na-etinye icing na mgwakota agwa achicha tupu ị ghee ya ma ọ nwere ike iji ya mee eserese n’elu.
1 Ogbo achicha na-a drinkingụ bred na nke a mịrị amị mkpụrụ glaze
1.3 Ihe edeturu
Ogbo achicha na-a drinkingụ bred na nke a mịrị amị mkpụrụ glaze
A dị mfe achicha mere na mmiri mmiri yogọt.
Ntụziaka ụdị: nri
Nkwadebe oge: 10M
Nri oge: 45M
Oge niile: 55M
100 g nke mkpụrụ (m ntekwasa na mmanụ a honeyụ na nnu)
1 akwa ọcha
Maka achicha achicha:
Àkwá 3 na 1 nkochi ime akwa
240 g nke mmiri mmiri yogọt (yogọt ị drinkụ)
Akpụkpọ anụ na ihe ọ juiceụ juiceụ nke lemon 1/2
85 g mmanụ sunflower
260 g ntụ ọka
1 envelopu nke ụdị yist Royal
Anyị na-etinye mkpụrụ ahụ na iko. Anyị na-Mmemme 6 sekọnd, ọsọ 6-8. Anyị debere na nnukwu efere.
Anyị na-adaba urukurubụba na pupụtara (ọ dịghị mkpa ịsacha iko ahụ na mbụ). Anyị na-etinye nsen 3 na nkochi ime akwa 1 na iko ahụ (a na-edebe ọcha nke akwa nke anọ ahụ iji mezie glaze ahụ). Anyị na-Mmemme 3 nkeji, ọsọ 3.
Anyị na-agbakwunye yogọt, nnu, anụ ahụ nke ọkara lemon, ihe ọ juiceụ itsụ ya na mmanụ. Anyị na-Mmemme 8 sekọnd, ọsọ 3.
Anyị na-ewepu nru ububa. Tinye ntụ ọka na yist. Anyị na-Mmemme 10 sekọnd, ọsọ 5.
Anyị na-etinye mgwakota agwa anyị na ebu nke gbasara 22 centimeters na dayameta, nke a na-ete na mbụ.
Iji mechaa icing, gwakọta akwa ọcha anyị debere na mkpụrụ anyị gwakọtara na mbido. Anyị nwere ike ịgwakọta ya na ndụdụ ma ọ bụ ngaji.
Anyị na-ekesa icing anyị na ngaji n'elu achicha achicha.
Ime na 180º (preheated oven) ihe dị ka minit 45. Anyị nwere ike iji mkpịsị osisi sweri mee ya nke ọma (ọ ga - abụ ma ọ bụrụ na ị dụpu achicha ahụ nkpa anyị ji atacha ọcha)
Anyị nwere ike ịkpụcha akpụkpọ nke ọkara lemon na iko ahụ, tupu ịmalite site na nhazi. Naanị ihe anyị ga-eme bụ itinye akụkụ edo edo nke akpụkpọ ahụ na iko ma mee ka ọ gbaa ọsọ ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ turbo strok. Echefula na anyị nwere mmasị na akụkụ edo edo (akụkụ ọcha nke anụ ahụ anyị ga-ezere n'ihi na ọ dị ilu)
Ozi ndị ọzọ - Esi see ifuru na achicha
Pathzọ zuru ezu na edemede: Thermorecetas » General » Ogbo achicha na yogọt na-a drinkụ
Ọ dị oke mma, mana enwere m obi abụọ: na icing, tupu ịgwakọta ọcha na mkpụrụ ahụ, ekwesighi ka pịa ya?
Gwakọta ya nke ọma na ndụdụ ma ọ bụ ngaji ezuola.
Zaghachi Ascen Jiménez
Cheesecake na Blueberries